Dad badan oo aanan u soo bixin codeynta senetarnimo ee Migori – The Voice of Northeastern Kenya
Dad badan oo aanan u soo bixin codeynta senetarnimo ee Migori
Star FM October 8, 2018
Waxaa 6-dii subaxnimo ee saaka bilaabatay doorashada xilka senetarnimo ee ismaamulka Migori in kastoo ilaa iyo hadda tirada codbixiyayaasha ee u soo baxay la sheegayo inay weli hooseyso.
Shacabka ku nool maamul goboleedkaasi ayaa maanta fursad u helaya inay soo doortaan senetar cusub oo ku matali karo aqalka sare ee dalka kadib markii uu bishii lixaad ee sannadkan geeriyooday Ben Oluoch .
Ilaa iyo hada ka jirto dhacdo amni darro ah oo la soo tabiyay waxaana amniga goobaha codbixinta sugaya saraakiisha booliska oo dhinac u riixaya dadka aanan goobta u tagin inay codkooda dhiibtaan ama aanan diiwangashanayn.
Waxay codbixinta ka dhaceysa ilaa iyo 826 xarumood oo mid waliba ay ku suganyihiin ugu yaraan 2 sarkaal oo boolis.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada ee IEBC ayaa shacabka ku nool ismaamulka Migori iyo dhamaan Kenyaanka u xaqiijiyay in doorashada xillka senetarnimo ee maanta degaanadaasi ka dhaceyso ay noqon doonto mid cadaalad ah.
Prof. Cabdi Yaquub Guuliye oo ka mid ah sarakiisha sar sare ee IEBC ayaa sheegay inay adeegsanayaan istaraatiijiyado dhowr ah si loo hubiyo habsami u socodka codeynta.
Sido kale waxaa uu carrabka ku dhuftay in qalabka codeynta la geeyay dhamaan degaanada kala duwan ee ismaamulkaasi.
Prof. Guuliye ayaa codbixiyayaasha ugu baaqay inay si weyn ugu soo baxaan doorashada si ay u soo xushaan senetar ay ku qanacsanyihiin oo ku matali karo aqalka sare ee dalka.
Iskuduwaha ammaanka ee gobolka Nyanza ,Leonard Katana ayaa wacad ku maray in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo cid waliba oo lagu cadeeyo inay ku kacday xadgudub ka dhan ah shuruucda doorashooyinka.
Guddiga IEBC ayaa sheegay inay doorashada ka qeyb qaadanayaan ilaa iyo 388,632 qof oo codbixiyayaal ah.
Dhanka kale waxaa maanta mar kale maxkamada la soo taagaya barasaabka Migori Mr. Okoth Obado oo lala xiriiriyay dilkii Sharon Otieno si damiin loogu siidaayo ama xabsiga uu ugu sii jiro.
← Wasiiradda waxbarashada oo shir guddoomin doonto kulan ku saabsan imtixaanada qaran
Madaxa xisbiga Thirdway Alliance oo ka hadlay sababaha ay ugu ololeynayaan in la qabto afti qaran →